तराई कि केटी - Nepali Sex Tube
तराई कि केटी
मेरो अफिस तराई तिरको ठुलो कम्पनि थियो । हामि १० बर्सदेखि त्यो कम्पनिमा सङै काम गर्ने हुदा निरजन र म धेरै नै मिल्ने सथि म्है सकेको थियो। निरजन् को घरमा मेरो रम्रो नै आउने जाने भैरेको थियो। निरजन् अलि दुब्लो अनि पातलो जिउडालको थियो भने मेरो सरिर ठिक्क को थियो। निरजन् को बिहे पनि त्यहि गाउको १ जना केटि सङ भयो। जुन केटि सङ मेरो पनि पहिला नै राम्रो परिचय थियो। बिहे पछि नि त्यो केटिलाई म उस्कै नाम ले बोलाउथे। उस्को नाम सुस्मिता थियो। मैले जब निरजन् को घर जान्थे त सुस्मिता लाई पनि के छ महनेर सोद्थे। उनि पनि नर्मल नै जबाफ् दिन्थिन्। निरजन् को बिहे भयेको २ साल हुदा पनि उन्का कुनैबच्चा भयका थियन।
म सुस्मिता लाई सधै सोध्थे के हो तिमिहरुको बुढा बुढिको होइन रातमा माया प्रेम हुदैन कि के हो खोइ आज शम्म त बच्चा त भयेको छैन त? सुस्मिता केहि बोल्दिन थिन। निरजन् भने हसेर नै टार्थे। मैले सोधे के हो कुरा? १ दिन निरजन् ले नै भ्न्यो उस्को बचचा हुन धेरै गर्हो छ रे। यो कुरा सुस्मिता ले पनि थाहा पायकि रहिछन्। र भन्दै। मैले १ दिन सुस्मिता लाई भने हेर सुस्मिता यो समाज मा बच्चा न्भैइ कन बस्न धेरै गार्हो छ है बेलैमा बुद्धि पुर्याउ। उस्ले म सङै सोधि य्स्तो कुरा मा कुन बुद्धि लगाउने? मैले सिधै भने कोहि बिर्य डोनर लाई भेट। उ पहिला त केहि बोलिन तर पछि भन्न थलि कि मैले कहा खोज्ने।?
जब म उन्को कोठा म पसे उनलाई च्याप्प अंगालोमा हालेर किस गर्न थाले । उनी पनि आँख चिम गरेर मलाई किस गर्न थाली । हामी दुईको मुख मुख जोडिएको थियो । कहिले म उसको जिब्रो चुस्थे , कहिले उ मेरो जिब्रो चुस्थी ……….. बिस्तारै बिस्तारै कपडा बाहिर बाटै उसको दुध माड्न थाले । देब्रे हात ले दुध माड्दै दाहिने हात बिस्तारै बिस्तारै उसको पुती तिर लगे । । मेरो लाँडो पनि ठन्किएर पेन्टनै च्यातुला झै भइ राथ्यो । बिस्तारै मैले उसको टी-शर्ट खोलिदिए , अनि ब्रा पनि खोलि दिए । कडा कडा दुधको पोका, आहा मुखै रसाएर आयो र उसको दुधको मुण्टो चुस्न थाले । बिस्तारै बिस्तारै दुधको मुण्टो जिब्रोले चलाउन थाले , उसलाई पनि असह्य भएछ , “आहहहहहहह………. सीसीसीसी…………… ओहहहहहहहहहहह” कराउन थाली । देब्रे दुध चुस्दा दाहिने दुध हातले माड्थे , दाहिने दुध चुस्दा देब्रे दुध …… यसरी नै १० मिनेट जती चुसी रहे ।
मलाई पनि अब खपि नसक्नु भईसकेको थियो । हतार हतार मेरो सबै लुगा खोले अनि नाङगै भए । फेरि अंगालो हाले र किस गर्न थाले । दुबै हात हरू दुधको पोका माड्न व्यस्त थिए । मैले उनको हात समातेर मेरो लाँडो तिर पुर्याए । उनले बिस्तारै बिस्तारै मेरो लाँडो खेलाउन थाली । म चै बिस्तारै बिस्तारै पेन्टी बाहिरबाटै उनक पुती खेलाउन थाले । पुक्क फुलेको पुती , हातमा महसुस भई राथ्यो । केही बेर बाहिरबाटै खेलाए पछि , उसको पेन्टी खोलिदिए । आहा ………… हल्का कैलो कैलो भुत्तला , ट्याप्ट टाँसिएको मुख …….. छेउ छेउबाट अलि अलि पानी चुहि रहेको ………… बिस्तारै औलाले उको पुतीको मुख फटाए र यसो हेरको त , ओहो ………… सानो गुलाबी रङको टीसी , टीसी वरीपरि भिजेको ………. छेउछेउमा पुतीको भुक्क फुलेको भाग …………. पुती भनेको त यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो ।
मैले बिस्तारै नम्रतालाई खाटमा सुताए , उनको गालामा किस गरे , बिस्तारै बिस्तारै तल तल किस गर्दै गए । गालाम , घाँटीमा , छातीमा , दुधमा , भुँडीमा , नाईटो ’round , तिघ्रामा , कापमा , खुट्टमा , पाईतालाम ……………. उनको शीर देखि पाउ सम्म किस गरे । मेरो किसको असर देखिई रहेको थियो । उनी “आहहहहहहहह…………… ओहहहहहहहहहहहहहह………… उहहहहहहहहहहहहहह…………. ससससस……….. ” गर्दै लामो लामो सास फेर्दै थिई । बिस्तारै म माथी तिर लागे र पुतीको वरी परी किस गर्न थाले । यहाँ किस गर्दा चै उसलाई खपि नसक्नु भएर क्यार ……. च्याप्प मेरो टाउको समाएर पुती तिर मेरो मुख लगी । उको पुतीबाट एक प्रकारको बासना आईरहेको थियो , बासनाले मेरो चिकाईको प्यास झनै बढाउन थालेको मैले महसुस गरे । उसले मेरो कपाल झन कस्सेर च्याप्प समाती , स्वाँ ……स्वाँ….. गर्दै लामो लामो सास फेर्न थाली । मैले उसको दुबै खुट्टा फटाए , पुतीको मुख पनि खुल्यो । बिस्तारै पुतीमा मुख पु्र्याए र गुलाबी रङको टीसीलाई जिब्रोले खेलाउन थाले ।
उसलाई सारै मजा आएछ , आहहहहहहहहहहह आहहहहहहहहह कराउन थाली । जिब्रोले घरी टीसी , घरी पुतीको छेउ खेलाउन थाले । केहि क्षण पछि मेरो पुरै जिब्रो पुती भित्र छिराएर खेलाउन थाले । यसो गर्दा उसलाई झन असह्य भएछ , “मजा आयो , प्लिज यसरी नै गर्नु न एकछिन ….. आहहहहहहहहहहहहह …………..ओहहहहहहहहहहहहहहहहहह” म पनि लगातार उसको पुती चाट्न थाले , पुतीको पानी पिउन थाले । ५ मिनेट पछि म उठे र मेरो लाँडो लगेर उसको पुती छेउमा राखे । हातले लाँडो समाएर पुतीको वरीपरी खेलाउन थाले । “अब छिटो गर्नु न प्लिज , मलाई गाह्रो भईसक्यो …… प्लिज छिराउनुन ……. प्लिज ……. प्लिज………” उनी कराउन थाली ।
” ल ल , अब गर्छु ” भन्दै बिस्तारै मेरो लाँडो पुतीमा छिराउन खोजे । शायद मेरो लाडो अलि मोटो भएकोले गर्दा होला या टाईट पुती भएकोले गर्दा हो , सजिलै छिरेन । मेरो पालो लाडोमा थुक दले र फेरि छिराउने प्रयास गरे । अहिले भने आधा जति छिर्यो । “ऐया दुख्यो , तपाईको त कत्रो मोटो रहेछ , बिस्तारै गर्नु है , मलाई पोल्न थाल्यो ” । “ल ल , बिस्तारै गर्छु ” भन्दै बिस्तारै बिस्तारै लाँडो छिराउन थाले । उनी “ऐया , आथा …..” कराउँदै थिई , म चै बिस्तारै बिस्तारै छिराउन थाले । अब चै पुरै लाँडो छिरी सकेको थियो , र पनि ऐया …. आथा भन्ने कराउछ छाडी सकेकी थिई । म उसको दुध चुस्दै बिस्तारै बिस्तारै हल्लिन थाले , उ पनि मलाई च्याप्प समाउँदै तल बाट धकेल्न थाली । मेरो चिकाईको स्पीड बढ्दै गयो , जति स्पीडले चिक्थे , उनी पनि कराउन थाल्थी “आहहहहहहहहहहह…………. ओहहहहहहहहहहहहह………… सीऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ …………… उहहहहहहहहहहहहहहहहहह………………. अझै……….. अझै……….. कस्सेर ………….. कस्सेर…………..” उसको हेरक आवाजले मलाई चिक्ने हौसला दिईरहेको थियो ।
म बल गरी गरी चिक्न थाले । केही क्षण चिके पछि , मैले उसलाई उठाए अनि घोप्टो पर्न लगाए । ” अब यसरी गर्ने ल ” मैले भने । “हुन्छ , तपाई त खप्पिस हुनुहुँदो रहेछ है , मलाई आज जस्तो मजा कहिले आको थिएन ।‍ । उ घोप्टो परिसकेकी थिई , मैले बिस्तारै उसको पुतीमा मेरो लाँडो छिराउन थाले । “ऐया , यसरी गर्दा दुख्ने रहेछ , बिस्तारै गर्नु है ” उनले भनी । “हुन्छ हुन्छ , बिस्तारै गर्छु ” भन्दै उनको पुतीमा लाँडो छिराए । पुक्क फुलेको पुतीमा घोप्टो पारेर चिक्नुको मजा नै बेग्लै हुने रहेछ । मैले बिस्तारै बिस्तारै चिकाईको रफ्तार बढाउँदै गए , उनी पनि मलाई साथ दिदै गई ।
१० मिनेट जति चिके पछि ” मेरो त झर्न लाग्यो मेरो पालो झन बल गरेर कस्सी चिक्न थाले । १०-१५ चोटि हल्लिए पछि , मेरो माल झर्ला जस्तो भयो र एक चोटि कस्सेर धक्का दिए , मेरो माल ह्बात्तै निस्कयो , मेरो पाईतालाबाट जमीन नै झरे जस्तो भयो , म उनको ढाँड माथी ड्वाङ ढले । उनी घोप्टो परेर बसी रही म उनको माथी लडी रहे । थाकेर लोत भाको थिए , हलका चीसो मौसममा पनि पसिनै पसिना भाको थियो हामी दुबैको जीउ । म पनि स्वा……… स्वा….. गर्दै थिए , उनी पनि स्वा….. स्वा ……… गर्दै थिई । ५ मिनेट जति यतिकै बसे पछि , म उसको छेउमा पल्टे , उनी पनि उतानो परी ।
मैले भने तिम्रो पुरा पुतिनै मेरो फुसिले भरेको छु अब त १ पटक मा नै २ वटा घोर्ले छोरो पाउचेउ तिमिले। उ पनि मख्ह हुदै भनि ल भगवान को कृपा भय होला नि। मैले भने भगवान को कृपा भयेर हुदैन माल मा दम हुनु पर्छ। उ हासि मत्रै। त्यो दिन् देखि मैले ९ दिन् शम्म हर रातको ३ पटक को दरले चिकेर सुस्मिता लाई गर्भबति बनयर नै छाडे। आज्कल पनि म उस्लाई सोद्छु होइन तिमिलाई अर्को छोराको रहर छैन? उ हास्दै जिस्किदै भन्छे मेरो रहर नभको होइन खोइ निराजन आज्कल ट्रेनिङ जदाइनन र पो त मार्यो। तर पनि म कहिले कहि दिउसो नै १ पटक सुस्मिता लाई चिकेर निस्किन्छु।
बिस्तारै उसको कुर्ताको चेन फुकाली दिए